तीज मान्न माईत आएकी छोरीलाई अचानक घरमा बोलेर किन गरियो ह त्या ? – Sunaulo Nepal TV
तीज मान्न माईत आएकी छोरीलाई अचानक घरमा बोलेर किन गरियो ह त्या ?
काठमाडौँ । केहि दिन अघि हिन्दू नारीहरुका सामू तीजको रमझम भैरहेको बेला रुपन्देहीमा एउटी चेलीको निकै रहस्यमय मृत्यु घटना बाहिर आएको छ । दुई वर्ष अघिमात्र विवाह बन्धनमा बाँ’धिएकी रुपन्देही तिलोत्तमा-८ मणिग्रामस्थित ४ नम्बर टोल माइती घर भएकी २७ बर्षीया सीता भण्डारी पौड्यालको आफ्नै घरमा रहस्यमय मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
असोज ६ गते तीजसमेत मानेर घर फर्किने गरि माइतीमा आएकी सीतालाई श्रीमान टीकाले भदौ १९ गते दिउँसो घरमा भतिजको बर्थडे छ ‘तिमी घर जाउ म पनि साँझ घर आउँछु’ भनेर पाल्पाबाट फोन गरे ।
उनले श्रीमानको बचन हार्न नसकी उनी घर फर्किइन् । उनी त्यस दिन दिउँसो घरबाट हिँडेका थिए । माइतीले उनी घरबाट हिँडेदेखि राति ९ बजेसम्म माइतीले फोन गरिरहे तर उनको फोन उठ्दै उठेन । अर्काे दिन एक्कासी अर्को माइतीलाई काम छ भनेर टीकाको घरबाट बोलाइयो । माइतीजन त्यहाँ पुग्दा मुहार र’क्ता’म्मे अवस्थामा सीताको मृत्यु भइसकेको थियो । उक्त दृश्य देख्न साथ त्यहाँ पुगेका सीताका बाबु-आमा बे’हो’स भई ढले ।
मृतक सीताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारीले छोरीको ह’ ‘त्या नै भएको भनि बुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएको तर प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन नमानेपछि त्यसको विरोधमा सयौं माईतीजनले आज बुधबार दिउँसो त्यस प्रहरी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
टीकाले पाल्पा तानसेनको होलाङदी जाने बाटोमा ‘दि दरबार कटेज एण्ड रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले त्यहीँबाट श्रीमतीलाई तिमी घर जाँदै गर्नु म साँझ आउँछु भनेर घर पठाएका थिए । त्यसपछि उनी भदौ १९ गते दिउँसो करिब २ बजेको समयमा माइत बाट घर हिडेकी थिइन् । माइतीजनले भने सीताको ह’ ‘त्या योजनाबद्ध गरिएको भन्दै न्यायको खोजीमा छ । बाँकि तलको भिडियोमा हेर्नुहोस
Previous के नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ ? ‘एमसिसी अमेरिकाले जबरजस्ती पठाएको हो कि नेपालले नै मागेको हो ?
Next त्यो बिहान जब तेजबहादुरलाई भतिज लोकबहादुरले देखे त्यसपछि…..